Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay duqeyntii lagu dilay qaxooti Soomaaliyeed (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay duqeyntii lagu dilay qaxooti Soomaaliyeed (DHAGEYSO)
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay duqeyntii lagu dilay qaxootigii Soomaaliyeed oo saarnaa doon mareeysay meel u dhaw xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen.
Labo habeen kahor ayaa diyaarad nooca loo yaqaano Helicopter gantaal xoogan ku dhufatay doonta ay la socdeen qaxootigaasi Soomaalida ah oo maraayay xeebaha Yemen, waxaana weerarkaasi ku geeriyootay illaa 42 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda waqtigeedu dhamaaday C/salaan Hadliye Cumar oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin qaxootigii Soomaalida ahaa ee shalay lagu laayay xeebaha dalka Yemen, isagoo xusay inay mas’uul ka yihiin isbaheysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo dowladda Yemen.
“Waxaan ka xunnahay xasuuqa foosha xun ee lagula kacay muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku safrayay doonta, kuwaas oo ahaa qaxooti muddo ku noolaa dalkaasi Yemen, balse doonayay inay nolol u raadsadaan meelo kale, wax la aqbali karo ma ahan, waxaana mas’uul ka ah xulufadda isbaheysiga la dagaalamaya Xuutiyiinta Yemen ee uu hogaaminaayo Sucuudiga” Sidaas waxaa yiri wasiir Hadliye.
Sidoo kale, wasiir Hadliye ayaa sheegay in dhinacyadaasi looga baahan yahay inay jawaabo kasoo bixiyaan falkaasi arxan daradda ah ee lagula kacay qaxootiga Soomaaliyeed, lana aaso intii dhimatay, daryeelna loo fidiyo inta dhaawaca ah, islamarkaana lala soo xiriiro qoysaska dhibanayaasha ah.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/salaaan Hadliye Cumar ayaa ahaa mid aan la fileyn xilli boqortooyada Sacuudiga ay saaxiibo dhaw la noqotay dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo ayna taageero dhaqaale u ballan-qaaday.